» रोल्पाका खड्बहादुर पुन मगर कमेडी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ४ मा
रोल्पाका खड्बहादुर पुन मगर कमेडी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ४ मा
२९ माघ २०७६, बुधबार १५:४१
मकवानपुर, २९ माघ । नेपालको पहिलो स्ट्याण्ड अप कमेडी रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन’ मा रोल्पाली कमेडियन खड्गबहादुर पुन मगरले छलाङ मारेका छन् । शोबाट बाहिरिएता पनि वाईल्डकार्ड राउण्डमा सर्वाधिक भोट प्राप्त गर्दै पून उत्कृष्ट ७ भित्र परेका खड्गबहादुरले कमेडी यात्रा जारी राख्दै उत्कृष्ट ४ को यात्रा तय गरेका छन् । यस हप्ता पर्फोमर अफ द राउण्ड घोषित हुँदै उनी सिधै उत्कृष्ट ४ मा प्रवेश गरेका हुन् ।
खड्गबहादुर पुनको सरल कमेडीले सबैको मन जित्ने गरेको छ । उनले उत्कृष्ट ५ को प्रस्तुतिका क्रममा जनआन्दोलन तथा नेपालको राजनीतिको उथलपुथलका बारेमा प्रस्तुति दिएका थिए । रोल्पामा घटेको माओवादी युद्धको परिवेशमा कमेडी गरेका खड्गले अन्तत त्यही प्रस्तुतीबाट पर्फोमर अफ द राउण्ड बन्दै उत्कृष्ट ४ मा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सफल भएका हुन् । हेर्नुहोस् भिडियो–
कमेडी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ५ मा विष्णुप्रसाद गौडेल मेक्सम, हिमेश पन्त, खड्गबहादुर पुन मगर, सुमन कार्की र सुमन कोईरालाले प्रस्तुति दिएका थिए । अब बाँकी रहेका ४ जनामध्ये ३ जना प्रतियोगीहरु दर्शक भोटका आधारमा अर्को हप्ता उत्कृष्ट ४ मा प्रवेश गर्नेछन् । शोमा अग्रज कलाकार सन्तोष पन्त, लोकप्रिय हाँस्य कलाकार मनोज गजुरेल, निर्देशक प्रदिप भट्टराई र चर्चित नायिका ऋचा शर्माले निर्णायकको भूमिका निभाईरहेका छन् । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा कमेडी च्याम्पियनको पहिलो विजेता को बन्नेछ छ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुमा लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।